के साँच्चिकै सपना रोका मगर पिडित नै हुन् त ? बिनयको विषयमा पहिलो पटक बोलीन् सपना, हेर्नुहोस् भिडियो – Gazabkonews
के साँच्चिकै सपना रोका मगर पिडित नै हुन् त ? बिनयको विषयमा पहिलो पटक बोलीन् सपना, हेर्नुहोस् भिडियो
सपना रोका मगर अहिले को चर्चित नाम हो । उन्ले गरेको काम ले बिस्वो मा नै नेपाल लाई चिनाउन सफल भएको छ । बे,बरिसे ला,स ज,लाउने काम गर्दै आएको सपना ले सामाजिक काम हरु नि धेरै गरेको छ ।
तर केही समय अघी बि,बाद परेसी उनि त्यो बि,बाद बारे पहिलो छोटी वास्तविक बताउन आज मिडिया मा आएको छ । आउनुश हेरै यो भिडियो जुन उन्ले सबै कुरा प्रस्ट पारेको छ ।